Gariiga oo ka soo kabtay dhibaatadii dhaqaale ee haysatay – Radio Muqdisho
Midowga Yurub ayaa xaqiijiyay in dalka Giriigga uu ku guulaystay in uu ka soo baxo barnaamijkii smatabixinta dhaqaalaha oo socday muddo saddex sano ah si uu dalkaasi uga soo kabto dhibaatadii dhanka deemaha ee haysatay.
Mashruuca lacagaha uu Midowga Yurub ugu talagalay xasilinta dhaqaalaha dalalka isticmaala lacagta Yuuro ayaa waxa uu samatabixinta dhaqaalaha Giriigga u qoondeeyeen 61.9 bilyan oo Yuuro oo dowladda dalkaasi looga taageerayay dhaqaalaha dalkeed uu u soo kaban lahaa.
Gireega ayaa ku jiray sideed sano sano oo adag oo gunti-isku dhiijis dhaqaale ah waxaana looso gurmaday saddex jeer iyada oo lasoo gaarsiisay deymo ka badan 260 bilyan oo Yuuro, taasi oo u dhiganta ku dhawaad 300 oo bilyan oo doolar oo uga timid dalalka Yuuro Zone-ka iyo hay’adda lacag aduunka IMF.
Athens ayaa haatan loo ogol yahay inay lacago ka amaahato suuqyada ganacsi, sida laga soo xigtay gudoomiyaha hay’adda xasiloonida Yurub kaasi oo sheegay in Giriiga uu cagahiiisa isku taagi karo.
Waxa uu uga mahadceliyay dadka Giriiga wadashaqeyna ay muujiyeen waxa uuna sidoo kale sheegay inay jiri doonan dabagal xoogan oo ku saabsan barnaamijyada samatabixinta markii ugu horeysyay tan iyo 2010-kii.
Tan iyo markii dhibaatooyinka dhaqaale ay ku habsadeen Giriiga sanadkii 2010, Giriiga ayaa waxaa soo gaaray samatabixintii ugu weyneyd ee dhaqaalaha taariikhda, balse xuriyada maamul ee dhaqaalahiisa gaarka ayaa yareyn doonto kormeerida adag ee gudiga Yurub.
Si dalalkaasi u xaqiijiyaan in Athens aysan ka bixin heshiisyadii ay isku afgarteen dalalka lacagaha amaahiyay, si ugu dambeyntii Giriigu u bixiyo amaahdaasi.
Guddoomiyaha Golaha shacabka oo shaaciyay waqtiga rasmiga ah uu furmayo kalafadhiga Golaha